Qarax khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho & Wararkii ugu dambeeye | Hohad News
Qarax khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho & Wararkii ugu dambeeye
Qarax geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay degaanka Weydow oo ka mid ah degaanada ku teedsan wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Goob-joogayaal ayaa sheegaya in qaraxan uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso oo lala lala eegtay gaari uu watay Gudoomiye ku xigeenka Arrimaha bulshada ee degaanka Garasbaaley Cabdullaahi Cabdi Max’uud.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah agagaarka Isbitaalka Macaani ay ku dhaawacmeen afar ruux oo rayid ah kuwaasoo wadada marayay, waxaana dhaawacooda loo soo qaaday Magaalada Muqdisho.
Masuulkii qaraxaas lala beegsanayey iyo ilaaladiisa ayaa ka badbaaday, mana jiraan wax war ah oo kasoo baxay maamulka degaanka Garasbaaley.
Degaanka Weydow iyo degaanada kale ee duleedka Magalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca qaraxyo loo adeegsado miinada dhulka lagu aaso taas oo lala eegto mas’uuliyiinta dowladda iyo Ciidamada dowlada.